यॉर्कशायर टेरियर: प्रजाति मानक, रखरखाव र हेरविचार
ती दिनहरूमा स्कटिश किसानहरू र ब्रिटिश खनिजहरू खेतहरू, अस्तित्वहरू र खनिजहरूसँग लड्नका लागि यॉर्कशायर टेरियर लिन्थे। मानिसहरू शायद यो थाहा थिएन कि यो सानो, निर्धारित र सक्रिय कुकुर, चूहको लागि दौडमा एक सहभागी भविष्यमा सबैभन्दा प्रसिद्ध ब्यूटी सैलून बन्न सक्नेछ - धन र सुरक्षाको प्रतीक।
आधुनिक यॉर्कशायर टेरियर्स
युक्रेनशायर टेरियर, जसको स्तर धेरै वर्षको लागि प्रदर्शन गरिएको छ, अहिले एक धेरै लोकप्रिय नस्ल हो। यसको प्रतिनिधि दुवै समृद्ध घरहरू र साधारण अपार्टमेन्टहरूमा बाँचिरहेका छन्। र यसको लागि कारण प्रजातिको सबैभन्दा सुन्दर विशेषता थियो: कुनै गंध बिना गैर-सुगन्ध ऊन, पशुको सानो आकार, व्यवहारको plasticity, स्थिर मनोचिकित्सा, जसले तपाईंलाई सजिलै शहरी परिस्थितिमा जीवनको अनुकूल गर्न अनुमति दिन्छ।
तथापि, फैशन र लोकप्रियता सधैं कुत्तों को सुलभ गर्न फायदेमंद छैनन्। यस अवस्थामा, युक्रेनशायर टेरियर थियो। नन्दको स्तर सधैँ वर्तमान समयमा राखिएको छैन। पिपाहरु को उच्च लागत को बेपरवाह ब्रीडर्स को बच्चाहरु को बिक्री मा नकदी को इच्छा को कारण बनता छ र अझै बाहिरी र मानसिक नियंत्रण को लागि परेशान छैन। परिवारमा पाउँदा यस्तो कुकुरहरू अचम्मको साथी र मित्र हुन्छन्, तर घटनाहरू छन् कि मालिकहरूलाई समस्याको कारण हुन सक्छ: जनावरहरू क्षेत्र, स्न्याप, काटन, फिसल वा लुगा लगाउँछन् वा सबै मार्गहरूमा छाल-द्वारा। यो अकस्मात हुन्छ, तर यो हुन्छ। कहिलेकाँही जीवनमा यो प्रकारको व्यवहार वास्तविक यर्कशायर टेरियरले सहन सक्दैन। नस्ल मानक न केवल बाह्य विशेषताहरूको उपस्थिति मानिन्छ, तर केहि व्यवहार र चरित्र।
यर्कशायर टेरियरका विशेषताहरू
ऊन - यो मुख्य विशेषता हो, जो यॉर्कशायर टेरियरको घमन्ड गर्न सक्छ। नस्ल मानकले रेशमी ऊनको उपस्थिति पोड बिना, मान्छ जुन मानव कपाल जस्तो देखिन्छ। यो धेरै नरम र सुन्दर छ, त्यसैले त्यसैले निरन्तर हेरचाह चाहिन्छ। हरेक दिन तपाईं यसलाई जोड्न आवश्यक छ, र हिड्न जाने अघि, प्रदर्शनमा भाग लिने ती व्यक्तिहरू, तपाइँ निश्चित रूप देखि बालपंथीहरु मा कपाल हावा गर्न आवश्यक छ। यस्तो श्रम-गहन प्रक्रियाले बाल भागको संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ, यसले क्षतिबाट जोगाउँछ र विभाजनको अन्त्यलाई रोक्न मद्दत गर्दछ, किनभने प्रदर्शनीमा ऊन जनावरको विकास भन्दा लामो छ।
यॉर्कशायर टेरियर, मानक (फोटो लेखमा दिइएको छ) जुन एक लामो सुन्दर कोटको उपस्थिति मानिन्छ, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ एक भित्ता र फफुली ढेर हुन सक्छ। यस समस्याको साथ, मेनु चयन गरी राम्ररी चयन गरियो र नियमित सङ्घर्ष गर्नेछ। यद्यपि यस्तो हेरचाहले काम गर्दैन, र ऊ ऊबेलमा गुमाउँछ, त्यसपछि त्यहाँ केही गर्न सकिंदैन - यो आनुवांशिक विशेषता हो जुन परिवर्तन गर्न सकिदैन।
त्यहाँ एउटा अधिक विशेषता हो कि यो यॉर्कशायर टेरियर छ। नस्ल मानकले जनावरहरूको आकार सीमित गर्दैन। न्यूनतम उचाई र वजन संकेत गरिएको छैन। त्यसैले कुत्तों को आकार संग स्थिति अस्पष्ट छ। केही प्रजननहरूले यो प्रजातिको ठूलो प्रजातिको विरोध गर्छन्, अरूले धेरै सानो प्राणीहरू काट्न खोज्ने गर्दछन् जुन अदृश्य चरित्र र खराब स्वास्थ्य छ। एमेच्योर प्रजनन आक्रामक वा सहकर्मी कुकुरहरूले यो तथ्यलाई सर्छ कि जीवनको पहिलो वर्षमा त्यस्ता पाहुना मालिकहरूले उसलाई चिडियाघरको चिनारीको व्यवहार सुधार गर्न पाउनेछन्। यी सबै समस्याहरू जोगाउन, तपाईंलाई एक स्वस्थ र धेरै सानो पिल्ला प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
यॉर्कशायर टेरियर: मानक, नस्ल का वर्णन
मानकमा पहिलो प्रकाशन 1986 मा उल्लेख गर्दछ। यो ध्यान दिइयो कि यो धेरै पटक पूरै भएको थियो र परिवर्तन भयो। नवीनतम संस्करणको साथ यॉर्कशायर टेरियर आरकेएफको वर्तमान मानक 10.11.2011 को प्रकाशित भएको थियो।
एक रोचक तथ्य यो हो कि पशु को न्यूनतम आकार (वजन र उचाइ) संकेत छैन। कल्पना गर्न गाह्रो छ, तर गिनीस बुकले टेरियर ल्याउँछ, जसको विकास केवल 6.5 सेन्टिमिटर हुन्छ।
आधुनिक यर्कशायर टेरियर के हो? नर्सको मानक जनावरले उत्साहित र सक्रिय साथीको रूपमा अद्भुत रेशमी लामो कोटको रूपमा वर्णन गर्दछ, जसलाई पछाडीमा विभाजनको रूपमा घिमिरे हुन्छ।
कुकुरको एक कम्पैक्ट बलियो शरीर र एक सुन्दर मुद्रा छ।
मानक मा जनावरको चरित्रलाई ध्यान दिईरहेको छ। कुकुर निश्चित रूपमा आक्रामक, सक्रिय, मान्छेसँग मित्रतापूर्ण हुनुपर्छ, बिना त्रसित र आक्रामकताको कुनै पनि आक्रमण। सन्तुलित र जीवंत चरित्र यस प्रजातिको लागि सबैभन्दा स्वीकार्य छ, जसले यसलाई एक सैलून कुत्ता र एक राम्रो साथी बनाउँछ।
यो यॉर्कशायर टेरियर कति लामो छ? मानकको आयाम सीमित छैन।
यो यॉर्कशायर टेरियर (मानक) कसरी देखिन्छ? पशुको विवरण हेडको साथ सुरु गर्नुपर्छ। यसमा ठूलो आकार हुनुपर्दैन, लामो कान, एक गोल खोप वा एक लामो चक्रको साथमा उभिएर। टेरियरको नाक जरूरी छ ब्ल्याक, अनुहार सानो छ। चहचहाना एक चालाक अभिव्यक्ति छ। कानहरू पत्र V को रूपमा सेट गरिएको छ र रातो फर संग ढाकिएको छ।
यो यर्कशायर टेरियरको आकार जुन, मानक (लेखमा देखाईएको फोटो) तपाईंलाई आफ्नो दाँत हेर्न आवश्यक छ। कुकुरसँग एक कैंचीको टुक्रा हुनु पर्दछ, भ्यानहरू कडा रूपमा ऊर्ध्वाधर हुनु पर्छ, र त्यहाँ निचो र उच्च दाँत बीचको दूरी हुनु हुँदैन। एक गंभीर हानि पशु मा धेरै दाँत को अनुपस्थिति हो।
एक कम्पैक्ट, ठीकसँग जोडिएको शरीरले यॉर्कशायर टेरियरलाई सक्रिय रूपले सहज रूपमा उत्प्रेरित गर्न सक्षम गर्दछ।
मानकमा, ऊ ऊ र यसको रंग धेरै सही वर्णन गरिएको छ। हाल, यर्कशायर टेरियर्सका विभिन्न प्रकारका छन्, तिनीहरूका रंगहरू कालो र उज्यालो रातो देखिन्छन्। तर वास्तविक राम्रा कुकुरसँग उज्ज्वल रातो टोनको साथ कालो टोपी छ। तपाईं वृद्ध हुनुहुँदा, कालो छायाले इस्पातद्वारा प्रतिस्थापित गरेको छ, तर उज्ज्वल ट्यानहरू फीका हुँदैन।
कोट को रातो रंग को कोहनी संयुक्त माथि, तर हाहि पैर मा सामने वाला हक संयुक्त मा हुक संयुक्त नहीं। मस्तिष्कमा प्रायः कपाल कपालको कानको नजिक पुग्छ।
कुकुरले आन्तरिक रूपमा, पुनरुत्थानपूर्वक सार्नु पर्छ। मानकको पछिल्लो संस्करणमा, यो पनि भनिएको थियो ऊ ऊ जनावरलाई हिँड्नबाट रोक्न सक्दैन।
नारीको गंभीर कमजोरीहरू हुन्: गलत रंग, डिसिड वा आक्रामक व्यवहार।
कुकुरको जीवन आशा कस्तो छ ?
यो प्रजातिको बारेमा बोल्दै, यो स्पष्ट हुनु पर्छ कि यर्कशायर टेरियर्स (मानक) लाई कति लाइभ लाइभ । कुकुरले आफ्नो स्वामीलाई कत्ति लामो बनाउनेछ?
कति जना यॉर्कशायर टेरियर्सहरू बस्छन्? टेरियर्सको प्रजातिको मानक जनावरको राम्रो स्वास्थ्य हो। यो प्रजातियों को प्रजाति बाह्र देखि पंद्रह वर्ष सम्म रहछन, र केहि सम्म बीस सम्म। एकै समयमा उनीहरूको व्यवहार उमेर प्रतिबिम्बित गर्दैनन्, उन्नत वर्षहरूमा पनि तिनीहरू दौडन्छन् र मजा लिन्छन्, जस्तै साना पिडाहरू। यसैले, यदि हामी यशयार्कशायर लाइभ (मानक) लाइभ गर्छौं भने हामी कुरा गर्छौं, हामी सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छौं कि उनीहरूले धेरै मालिकहरूको लागि कृपया आफ्नो मालिकहरू पाउनेछन्।
तर मिनी टेरियरहरूको लागि, उनीसँग यस्तो बलियो शरीर छैन र सबै प्रकारका रोगहरूलाई अधिक सम्वेदनशील छ। तिनीहरूको अस्तित्वको औसत अवधि सात देखि9वर्ष सम्म हो। तथापि, यो मनमा हुनु पर्छ कि मिनी-टेरियर्सहरू अत्यन्त कमजोर हुन्छन् र कमजोर हड्डिहरु र कमजोर, भित्री शरीर पनि - यति धेरै स्वभाविक प्रकृति हो। त्यसोभए, तिनीहरू प्राय: खराब परिस्थितिहरू हुन्छन्। यस्ता जनावरहरू मालिकहरूको बढि ध्यानलाई आवश्यक हुन्छन्, किनकि उनीहरूले फ्याँक्ने, हटाउँदा वा फुट्न सक्दछन्, सोफेबाट जोगिन्छन्। तिनीहरू यति सानो छन् कि तपाईं तिनीहरूलाई चल्नु वा ढोका खिच्न सक्नुहुन्छ। यसैले, साना केटाकेटीहरू को लागि यस्तो कुत्ते को खरीद नगर्नुहोस्।
यॉर्कशायर टेरियरको वजन, हामीले पहिले नै भनिएको छ, निर्दिष्ट गरिएको छैन तर ब्रोडर्सहरू थाहा छ कि यो लगभग 3.1 किलोमिटर हुनुपर्छ। मिनी-टेरियरहरू प्राय: दुई किलोग्राम भन्दा कम हुन्छ।
सानो यर्कि (एक देखि दुई किलोग्राम)
यॉर्कशायर टेरियर (मिनी) महिलाको हैंडबैग वा जेबको आभूषण हो। आफ्नो अपार्टमेन्टमा तपाईं शायद नै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो बिरामीले सजिलै संग घरको सबै बासिन्दाहरूलाई सहज बनाउँछ: मानिसहरूबाट चूहों र बासहरू, चिन्चिलमा। यॉर्कशायर टेरियर्सको असल स्तरले उनीहरूलाई सानो खाएको छ भनी सुझाव दिन्छ, तर तिनीहरूसँग अत्यन्तै सुन्दर प्रकृति छ। कुकुरले एकातिरपन गर्न सक्दैन। तर यो खेलहरूमा धेरै चासो छैन, कसरी महान् आफ्नो मालिकको हातमा बस्न चाहानु ठूलो छ। यो प्रजाति प्रजननको लागि पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त छ। यसको अतिरिक्त, यो सम्झना हुनुपर्छ कि यस्तो जनावरले सुरक्षाको शर्तमा पनि धेरै ध्यान चाहिन्छ। यो सजिलै संग पिच वा कुचल हुन सक्छ। विशेष गरी स्वच्छ बच्चाहरू हुनुपर्दछ, किनकि तिनीहरू जनावरहरूसँग खेल्ने धेरै मनपर्ने हुन्छन्, र युवा यर्करहरूलाई विशेष ध्यान दिएर व्यवहार गर्नुपर्छ।
यॉर्कशायर टेरियर (मानक)
यर्कशायर टेरियर - प्रजनन र प्रदर्शनी करियरको लागि एक आदर्श कुकुर। उहाँ उत्कृष्ट मित्र हुनुहुन्छ, बच्चाहरूको लागि राम्रो साथी। यॉर्कशायर टेरियर मात्र एक महान खेलाडी र निरीक्षक होइन, तर एक सुन्दर नानी पनि। उनले सजिलैसँग सर्कस चालहरू सिक्दछन्।
तर जनावरको फर तपाईंलाई ध्यानपूर्वक हेरचाह गर्न आवश्यक छ। यो धेरै अधिक छ, र यसकारण प्राय: प्राय: यर्कर्सले डराएका छन्, कपालको रेखामा जटिल रूपहरू दिन्छन्। यस्तो कुकुर कुनै परिवारमा राख्नको लागि उपयुक्त छ।
मानक र मिनी टेरियर बीच के फरक छ?
हाल, धेरैले यसलाई मिनी-युक बनाउन खोज्छ, किनभने तिनीहरू धेरै सानो र प्यारा छन्। जाहिरा तरिकाले, यस्तो लोकप्रियता मूल्यलाई असर गर्यो, जस्तै कि मानक मानक प्यारी बच्चा भन्दा सस्तो छ। यद्यपि तपाईंलाई बुझ्न आवश्यक छ कि टेरियर मिनीले जनजातीय मूल्य बसाल्दैन।
यो यॉर्कशायर टेरियर मिनी र मानक बीचको के हो? यी जनावरहरू बीचको भिन्नता एकदम ठूलो छ, यद्यपि तिनीहरू एउटै जातिको हुन्:
सानो यर्कै सानो परिवारमा परिवारमा लिन सकिँदैन। जनावरको हड्डी धेरै नाजुक हुन्छन्, र यसैले यो मर्म गर्न सजिलो छ।
एक पिल्ला मिनी लगातार पर्यवेक्षणको आवश्यकता छ: उसले सोफे वा बिडाबाट जगेडा गर्न सक्दैन, किनकि उसले प्वाल हटाउन सक्छ र उसको टाउकोमा हिड्न सक्छ।
तपाईं सानो केटीहरू बुन गर्न सक्नुहुन्न। "आयाम" र जनावरको वजनले जन्म र सन्तानहरूलाई अनुमति दिन्छ। एक कुत्ता मात्र मर्न सक्छ।
सानो यार्किसमा, फन्ट्यानेल ओभरग्रो छैन, त्यसैले तपाईंलाई यसको साथ सावधान हुनुपर्छ।
मानकहरूको लागि, तिनीहरू बलियो हुन्छन्, लामो जीवन बिताउँछन्। तिनीहरू सधैं उत्साहित र सक्रिय छन्।
यॉर्कशायर टेरियरहरू (मानक) प्रसिद्ध रूपमा सबै परिवारका सदस्यहरूसँग मिलेर विशेष गरी बच्चाहरू। तिनीहरू सबै खेलहरूमा सक्रिय भाग लिन्छन्। यर्क मिनीको विपरीत, मानकलाई नजिकको अभिभावक चाहिन्छ। यस्तो कुकुर एकदम बलियो र सहनशील छ।
यॉर्कशायर टेरियर मानक र मिनी, हामीले बिचबिचका बिषयमा भिन्न फरक फरक छ, र यो मुख्य कारणले उनीहरुको साइजको आकार हो। तपाईंको लागि कस्तो प्रकारको जनावर उपयुक्त छ - एक घर गुडिया वा एक सक्रिय कुत्ता - आफैलाई निर्णय गर्नुहोस्।
रखरखाव र हेरविचार
यॉर्कशायर टेरियर न केवल शहरको अपार्टमेन्टमा राम्रो महसुस गर्नेछन्, तर देशको सम्पत्ति पनि। पाल्तु राख्नको लागि मुख्य अवस्था सुत्ने ठीक तरिकाले सुसज्जित ठाउँमा रहेको छ।
बाल, पंजे, आँखा र कानहरूको हेरविचार गर्न विभिन्न उपकरणहरू र पशुको लागी एक हैंडबैगको लागि यो पनि आवश्यक छ।
योर्कलाई आराम गर्ने ठाउँ छान्नुहोस् ताकि यो ड्राफ्टमा छैन। एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु यस स्थानको रिमोटनेस मास्टर बेडरूम बाट हो। यस जातिको कुकहरू अकेला नहुन चाहँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू मानिसहरूबाट टाढै बस्न चाहँदैनन्। तिनीहरू सधैँ स्पेसलाइटमा हुनुपर्दछ। यो एक उच्च कुकुरमा कुत्तेको बेंचको व्यवस्था गर्न राम्रो छ - त्यसैले यो एक जनावरको लागि सबै परिवारका सदस्यहरू देख्न अधिक सुविधाजनक हुनेछ, र एकै समयमा र सबै घटनाका बारेमा जानकारी हुनुहोस्।
यॉर्कशायर टेरियर निश्चित रूपमा एक स्तम्भसँग एक शौचालय लैजान आवश्यक छ। शौचालयको लागि ठाउँ राम्रो छ कि प्रवेशको नजिकै छान्नुहोस्, किनकि कुकुरहरूले आफ्नो क्षेत्रको किनारामा चिन्ह लगाउँछन्।
टेरियर्सका लागि कम्बोले धातुबाट खरिद गर्नुपर्छ, तर ब्रश - काठ वा प्राकृतिक ब्रेकले। ऊनको लागि प्लास्टिकको उपकरण उपयुक्त छैन, किनभने यसले कोइलहरूको गठन गर्दछ। ती जनावरहरू प्राय: हिँड्न सक्दैनन् एक पंजाको आवश्यकता हुनेछ।
तपाईंको पाल्तुका लागि तपाईंलाई ठूलो मात्रामा कस्मेटिक्स (कंडीशनरहरू, शम्पोओस, प्यानहरू, कान र पंजाहरू) को हेरविचार गर्न आवश्यक छ। यो व्यक्तिगत रूपमा चयन गर्नुपर्छ। सानो प्याकेज खरिद गर्नुहोस् र एक महिनाको लागि तिनीहरूलाई परीक्षण गर्नुहोस्।
आँखाहरू दैनिक निरीक्षण गरिन्छ। यिनी मध्ये, लोशन को उपयोग कोस्ट को उपयोग गरेर। कानहरू निरीक्षण गरिएका छन् र हरेक हप्ता सफा गरिन्छ। कुत्तों मा दूध दाँत पशु चिकित्सक देखि हटाइनु पर्छ। यसबाहेक, हामी बिर्सनु हुँदैन कि युक्रेन खोपको हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई संक्रामक रोगहरूबाट बचाउनुहोस्।
यॉर्कशायर टेरियर खाना
फिडिंग टेरियरको जीवनमा मुख्य क्षणहरू मध्ये एक हो, जसमा उनले आफ्नो चरित्र देखाउन थाले। जनावरहरू सामान्य भोजन सजिलै छोड्न सक्छन् र स्वामी तालिकाबाट स्वादिष्ट स्वादिष्ट हुन सक्छन्।
यो सबै घरमा सूखी खाना संग कटोरे को व्यवस्था गर्न आवश्यक छैन। यो यर्कर पन्ध्र मिनेट खाने को लागि पर्याप्त छ, र फ्रिजमा खाना सफा गर्न। पशु पोषण मौसमी सब्जियां, फलफूल, उबले चावलको साथ फरक हुन सक्छ। यॉर्कशायर टेरियरहरू घरपरिवारका योगहरूका लागि उपयोगी हुनेछन्। तिनीहरूको तयारीको लागि निम्न-फ्याट घर बनाइएको दूध प्रयोग गर्दछ। फिडको लागि मासुहरू र कारवाहीको साथमा लिइन्छ। एक सफा काटी, खाना खानेको लागि उपयुक्त छैन, किनकि यसले ज्वरोकोटिनल पथमा उचित भार गर्दैन। मासु को टुक्रा मा काट दिए र यसको कुत्ते दिइन्छ, कुनै पनि मामला मा मासु मासु को सिफारिश को लागी (यो खराब गरी पाईन्छ) को सिफारिश छ।
जब सुत्ने खाना खाने छनौट गर्दा, तपाईंलाई थाहा छ कि यदि उनी उनको लागि उपयुक्त छन्। मुख्य संकेतक पाचन प्रणाली को राम्रो काम हो, साथै कोट र छाला को उत्कृष्ट अवस्था हो।
सही पिल्ला कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईं आफैलाई यो प्रजातिको एक जनावर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, पहिला तपाईंलाई यर्कशायर टेरियर स्तरहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ। पिल्ला केहि विशेषताहरु अनुसार चयन गरिएको छ:
बच्चाको जन्म र नर्सरीको साथमा एक शिशुको हुनुपर्छ।
खोपका साथ अन्तर्राष्ट्रिय पासपोर्ट (पशु चिकित्सक) उपलब्ध हुनुपर्छ।
तपाईंले जनावरको उमेरमा ध्यान दिनुपर्छ। सबै खोपहरु 2.5 महिना सम्म बनाइन्छ, जसको अर्थ यो हो कि भाइरस पहिले पिडा बेच्न सक्दैन।
तपाईले केवल नर्सरीमा टेरियर खरिद गर्न आवश्यक छ।
एक स्वस्थ कुत्ता को एक हंसमुख र हंसमुख उपस्थिति हुनुपर्छ।
एक टेरियर को एक पिल्ला पहिलो दिन देखि प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ, जस्तै नै यो तपाईंको घर मा देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला, यो तपाईंको नामको जवाफ दिन र खाना खानको स्थानमा लगाउन को लागी सिखायो।
टीकाकरणको अवधिमा पिपार्नीहरूले शरिर र कलरलाई सिकाउनुपर्छ। यसलाई वैकल्पिक रूपमा राख्नु राम्रो छ र यस समयमा कुकुरलाई मनोरञ्जन गर्दछ ताकि उनीहरूलाई कुनै ध्यान नदिईन।
टेरियर यी सामानहरूमा प्रयोग हुने बित्तिकै, तपाईंले छोटो पट्टालाई जोगाउन र अपार्टमेन्ट वरपर उनको साथ हिँड्न सक्नुहुनेछ।
एकपटक कुकुर सबै खोपहरू र कारागारमा पास भएपछि, यो हिँड्नको लागी सुरु गर्न सकिन्छ। यो क्षण जनावरको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले यसको रिश्तेदारहरूसँग कुराकानी गर्न सिक्नुपर्छ, यसले प्रदर्शनमा व्यवहारको समस्याबाट बच्न सक्दछ।
कुकुर सक्रिय रूपमा हुनुपर्छ हिंड्न। यसले उसलाई इशारे, उपहार व्यवहार लगातार प्ले गर्न आवश्यक छ भन्ने हो। तपाईं बस Monotone तल सडक, न्यूयोर्क कुनै ध्यान लक्षविना हिड्नु गर्न सक्नुहुन्छ। को पैदल आनन्द र संगत मात्र होइन कुकुर आफ्नो मालिक ल्याउन, तर पनि गर्नुपर्छ। थुप्रै तरिकामा सबै भन्दा राम्रो विकल्प - एक पट्टा सहकारी खेल बिना सडक: लुकाउन र खोजी, क्याच-अप। जनावर आफ्नो मास्टर को दृष्टि गुमाउन छैन सिक्नुपर्छ।
Yorkshire टेरियर्स चाँडै चपलता जस्ता खेल प्रशिक्षण। तिनीहरू सबै गोले मार्फत जाने विशेष खुशी छन्। टेरियर्स पनि कान्छो प्रतिनिधिहरु को श्रेणी मा प्रतियोगिताहरु भाग।
चालु आशक्त छन् गर्नेहरूले प्रक्रिया र आफ्नो कुकुर गर्न ल्याउन सक्छ। यो खेल क्यानी क्रस भनिन्छ।
यो कि सुन्दर लामो कपाल छैन सक्रिय खेल संग संयुक्त सकिन्छ उल्लेख गर्नुपर्छ। माटोको जाडो, हिउँ, धूलो, गर्मी, मा - यो सबै जो पछि आवश्यक छ साथै पछि हेर्न खोपडी, मा नकारात्मक प्रभाव छ। धेरै शायद, मान्छे संग प्रदर्शनियों यर्क सक्रिय खेल जीवन संयोजन गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्। को पदक वा सक्रिय जीवन शैली त: तसर्थ, मालिक एउटा कुरा छनौट गर्छन।
तर, हामी खेल र सक्रिय प्ले मा संलग्न भनेर बुझ्न पर्छ, सबैले टेरियर yorkshire गर्न सक्नुहुन्छ। मिनी, स्तर धेरै स्वास्थ्य र शारीरिक क्षमता को मामला मा प्रत्येक अन्य फरक छन्। अपेक्षाकृत सानो टेरियर गर्न छैन सक्रिय जीवन शैली कुरा। त्यसैले, तपाईं चलान तपाईं संग हुनेछ जनावरको र व्यायाम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले कुनै पनि मामला मा बस छैन यस्तो साहसिक कार्य को सक्षम छ जो नस्ल, को सानो फिट छैन हुनेछ।
नस्ल को इतिहास
ल्यानकशायर र योर्कशायर - Yorkshire Terrier घर इङ्गल्याण्ड, वा बरु, दुई उत्तर काउन्टी हुन मानिन्छ। प्रत्यक्ष पुर्खा जो पनि एउटा सानो आकार छ, र लामो haired जातिहरु बुझाउँछ uotersaydsky टेरियर छ। यस्तो जनावरको मुख्य उद्देश्य मुसा को उन्मूलन, साथै मालिकहरूले नदी र नहरहरुमा मार्फत यात्रा गर्दै समर्थन थियो। यो नस्ल र यसको नाम पायो कि यस कारण लागि हो। को किसान ठूलो कुकुर छ अनुमति छैन थिए, तिनीहरूले आफ्नो मालिक poach मदत भनेर विश्वास थियो।
अर्को नस्ल, एक योर्कशायर टेरियर जस्तै म्यान्चेस्टर Terrier छ। सबै पुर्खाहरूको यर्क अर्द्ध-लामो कपाल ठूलो जनावर थिए। आफ्नो वजन छ देखि सात किलोग्राम गर्न लिएर।
नस्ल योर्कशायर नीलो-र-तन टेरियर पहिलो प्रतिनिधिको 1886 मा मानकीकृत थिए। र 1898 मा उहाँले यी लघु कुकुर को प्रशंसक पहिलो क्लब गठन।
को टेरियर्स बारेमा रोचक तथ्य
सुरुमा, टेरियर्स को जन्म ठाउ लडाकूको मुसा रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाल तथापि, नस्ल लामो देखि आफ्नो मूल उद्देश्य भूल र पाल्तु जनावर हाम्रो घरमा बस्न थियो।
हालैका वर्षहरूमा चट्टान शीर्ष-10 प्रविष्ट गर्नुभयो। र 113 ग्राम को एक वजन संग सानो सदस्य रेकर्ड को गिनीज बुक मा सूचीबद्ध छ।
ऊन Yorkie मानव बाल गर्न structurally यस्तै। यो मान्छे मा एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन। बुद्धि सन्दर्भमा संग, Yorkies 23 133 को बाहिर कब्जा।
नस्ल को इतिहास एक Smokey नाम यर्क सहित प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको संख्या छ। 18 सेमी को वृद्धि संग, यो 1.8 किलो वजन। उहाँले गिनी को jungles मा लोमडी को बिल मा अमेरिकी सैनिकहरु द्वारा फेला परेन। सँगै आफ्नो मालिकसँग पशु सेवा दुई वर्ष सेना मा, नियमित एक प्याराशुट संग कूद, सिपाहीहरूले भोजन खाने बित्यो। Smokey (1957) को मृत्यु पछि टोप मा एक सानो कुकुर को रूप मा एक स्मारक थियो।
बेलायत मा, अझै पनि 22 भन्दा बढी वर्ष छ जो पुरानो योर्कशायर टेरियर, बसोबास।
सेतो पूडल - एक विश्वासी र विश्वासी साथी
पागलपन: महिला मा लक्षण। महिला मा पागलपन को पहिलो संकेत
"इरिथ्रोमाइसिन" मलम: प्रयोगको लागि निर्देशन
Chulym नदी - tributaries र headwaters
Troekurov चिहान: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने? के उल्लेखनीय छ?
फलाम को दंड अभ्यास: यो चिउँडो र पकड को प्रकार पुल
होटल Medplaya होटल क्यालिप्सो3* (स्पेन, कोस्टा Dorada): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा